Tattoos Mambabatok. Whang-od, oo ah dhaxalka ugu dambeeya ee qaab dhaqameedka Filipino | Tattoo
Tattoos Mambabatok. Whang-od, oo ah dhaxalka ugu dambeeya ee dhaqanka Filibiin
Whang-od wuxuu isu diyaariyaa inuu sameeyo tattoo (Fuente).
Buscalan, tuulo yar oo ku taal Filipinas, way nooshahay Whang-od Oggay, naag boqol jirsatay oo suurto gal tahay inay tahay fanaankii ugu dambeeyay ee Tattoos mambabatok, nooc ka mid ah Farshaxanka dhaqanka Filipino.
Soo ogow waxa ugu xiisaha badan sheeko tan haweeney iyo a farshaxanka tattoo en khatarta in la waayo akhriska qoraalkan!
1 Nolol u daacad ah farshaxanka tattoo
2 Dhaqan iyo halyeey
3 Laga soo bilaabo mashquulkii Manila ilaa aamusnaan Buscalan
4 Mid ka mid ah mambabatok tattooists kii ugu dambeeyay ee ka yimid Filibiin?
5 Whang-od waxay heshaa aqoonsi ay mudan tahay
Nolol u daacad ah farshaxanka tattoo
Gacanta naagta duugga ah, oo ay ka buuxaan tattoos (Fuente).
La nolosha Whang-od wuxuu xiriir dhow la lahaa kuwan Tattoo dhaqameed Laga soo bilaabo Filibiin. Haweeneeydii duugga ahayd ayaa is tirinaysay tan iyo markii shan iyo toban sano. Su aabbahay baray sida iyo, inkasta oo markii hore uu xaraashka midkoodna may soo sheegin faa iido dhaqaale, inyar oo yar ayay magac u samaynaysay.
Lahaansho waa od leeyihiin jirka ayaa helay tattoos, oo u eg tan iyo markii ay ahayd a wiil dhalinyaro ah. Midka koowaad wuxuu ahaa Python jaranjaro.
Dhaqan iyo halyeey
Tattoo-yadaani waxay u baahan yihiin dabacsanaan weyn iyo adkeysi xanuunka! (Fuente).
ka Tattoos mambabatok by Whang-od waa kuwa Muunad ugu dambaysay ee farshaxankan. Naqshadahooda waxaa lagu kala soocay iyagoo ka kooban ujeedooyinka dabiiciga ah y joomatari. Saxeexaagu waa a tattoo de saddex dhibcood. Kuwani xaraashka, taas oo raacda a habka taasi waxay dib ugu noqotaa in ka badan kun sano, waxaa lagu sameeyaa a qalab aad u fudud, sida kuwa maaddooyinka khad: Agua y dhuxul.
Iyo, sida ugu dhow dhammaan ujeedooyinka dhaqanka, xiriirka farshaxanka tattoo farshaxankiisa ayay ku dhowdahay sixir, oo waxaa ka buuxa khuraafaad iyo halyeeyada.
Tusaale ahaan, bilowga waa od lagu xardhay dagaalyahanno horeba haweenka ee deegaankooda oo doonayey inay qurxiyaan maqaarkooda, sidaasna ku sameeyeen canto y saadaalinta. Laakiin, leh la waayey of the dagaalyahanno iyo kororka dalxiisayaasha, ka Tattoo artist wuxuu joojiyay heesida iyo saadaalinta mustaqbalka macaamiishiisa. Haweeneeydii duqda ahayd ayaa aaminsan canto iyagu waa isaga uun qurxin haweenka deegaankaaga iyo dabaaldega guulaha ee dagaalyahanada.
Intaa waxaa dheer, mid kasta tattoo mambabatok leeyahay a calaamadeyn aad u sax ah oo xiriir dhow la leh dhaqanka tuulada. Tusaale ahaan, isaga tattoo gorgorka waxay astaan ​​u tahay a dagaalyahan dilay a cadowga.
Laga soo bilaabo mashquulkii Manila ilaa aamusnaan Buscalan
Dukaanka Tattoo ee Whang-od (Fuente).
Tani waa sharaf leh Tattoo artistIntaas waxaa sii dheer, ma noqon karto weli. In kasta oo ay leeyihiin wax ka badan boqol sano, oo aad usbuuc joojiso sanadka 2017 sababo caafimaad awgood, aqbal in yar ¡soddon macaamiisha maalintii!
ka macaamiishaIntaas waxaa sii dheer, waxay ka yimaadaan fog fog tuulada fog ee Way baadheen. Waxay maraan beero baaxad leh ee Filibiin markay ka tagayaan mashquul ka socda magaalooyinka sida Manila, iyo kor u kaca dalcadaha dhaadheer taas oo horseedda tuulada halka a calaamadeysnaan ku dhawaaqida albaabka aqal yar oo ka mid ah Tattoo artist.
Mid ka mid ah mambabatok tattooists kii ugu dambeeyay ee ka yimid Filibiin?
Gabadha abtiga u ah Whang-od waxay noqon doontaa mid kamid ah dhaxal-sugaha eedadeed.Fuente).
Dice waa od taasi ma noqon karto gudbin farshaxankiisa qofkasta maxaa yeelay waa inuu noqdaa a dhaqanka isku si ha u dhacdo Familia. Laakiin tattoo halis ugu jiro noqday mid qaadey cudurka. Maadaama aysan carruur helin, waxay umuuqataa in dhaxalka ay Tattoos mambabatok halkan ayaa lagu lumin doonaa.
Nasiib wanaag waa jiraa mid rajo yar: ay abti Grace Palicas iyo xubnaha kale ee qoyska ayaa xiiseynaya farshaxanka dhaqanka of the Tattoos mambabatok. In kasta oo ay ujeeddooyin sidaas ma aha murugsan sida kuwa waa od, iyo in canto y saadaalinta, ahaanshaha mid dabiici ah oo afka ah, ayaa lagu waayi doonaa iyadoo naag duug ah, waxay umuuqataa tan farshaxanka qoyska xirka mustaqbalka.
Whang-od waxay heshaa aqoonsi ay mudan tahay
Tattoo mambabatok dhammeeyey (Fuente).
In kastoo laga yaabo waa od sidaas ha noqon caan ah sida fanaaniinta kale ee tattoo sida Kat Von Din Filipinas waa ku filan tahay yaqaan, oo xitaa helay qaar magacaabid in loo tixgeliyo wanaagga aadanaha iyo qayb ka mid ah dhaqanka noola ka yimid dalkan.
Intaa waxaa dheer, waxay u muuqatay mid kala duwan dokumintiyaal iyo qaar soo-dhoweynta. Sanadkii 2017 wuxuu sidoo kale kaqeyb qaatay a heshiis agtiisa tababarayaal.
Taariikhda Wan-od, kii ugu dambeeyay mambabatok artist artist, waa shaki la'aan xiiso leh. Nolol ka duwan, fudud, oo gebi ahaanba u heellan a farshaxanka khatar ku jira, laakiin maxaa dhammaan doona badbaado, xitaa haddii ay tahay wax uun kala duwan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Tattoo » Tattoos » Fanaaniinta Tattoo » Tattoos Mambabatok. Whang-od, oo ah dhaxalka ugu dambeeya ee dhaqanka Filibiin
Tattoo tattoos anqawga: ururinta naqshadaha
Tattoo qoorta qoorta: ururinta naqshadaha